စံချိန်တင်အေဂျင်စီ၏သေခြင်း | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 1, 2010 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 2, 2015 Douglas Karr
အဆိုပါရှုခင်းအေဂျင်စီများများအတွက် morphing ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူရှိခဲ့ဖူးသူ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူရွေးချယ်သူသို့မဟုတ်အေဂျင်စီတစ်ခုရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအရောင်းခေါ်ဆိုမှု ၅ ခုထက်နည်းသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်မတို့ကိုငှားလိုက်တယ်။ သူတို့၏ site ကိုတစ်မိနစ်အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်သူတို့၏ရှေးဟောင်း CMS အားဖြင့်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့ကိုငါအသိပေးခဲ့သည်။ သူတို့အတွက်သူတို့ site ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောအေဂျင်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးအေဂျင်စီကသူတို့ကို CMS အသစ်သို့အဆင့်မြှင့်ရန်ထပ်ဆင့်ကိုးကားချက်ပေးခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုအေဂျင်စီကသူတို့ကိုအစောပိုင်းကအသိပေးခဲ့ပါဘူး?
အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစေ့စေ့လေ့လာဖို့ပြောခဲ့တယ်။ ပြproblemနာကသူတို့မေးခဲ့သောမေးခွန်းများသည်ပလက်ဖောင်း၏အားသာချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စင်မြင့်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသူတို့အဘယ်ကြောင့်သတိမထားမိကြသနည်း။ ထိုအဖွဲ့သည်အလားအလာရှိသောလိုအပ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုလုံလောက်စွာမဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အလျင်အမြန်ရောင်းအားခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
SaaS application ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအား၎င်းတို့ ၀ ယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည်။ SaaS ၏အတွေ့အကြုံနှင့်စျေးကွက်တွင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗဟုသုတရှိခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်နဲ့နည်းပညာအသင်းတွေရှိတယ် လတ်ဆတ်သော ကြည့်ရှုပါ။
ငါတို့ဟာမင်းတို့ရဲ့ပုံမှန်အေဂျင်စီမဟုတ်ဘူး ... ဒါမှမဟုတ်ငါထင်တယ်။ မှနောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းမီဒီယာအစီရင်ခံစာ၌တည်၏ eConsultancyသူတို့ကအေဂျင်စီတွေနှင့်စျေးကွက်သမားတွေဘယ်လိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ရလဒ်တော်တော်တုန်လှုပ်ဖွယ် ... နှင့်အကျွမ်းတဝင်များမှာ!
နောက်တဖန်မရှိရ မှတ်တမ်း၏အပြန်အလှန်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီ - အေဂျင်စီကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်နှင့်အမျှဒစ်ဂျစ်တယ်ယူနစ်တစ်ခုကို“ စံချိန်တင်အေဂျင်စီ” အဖြစ်ရွေးချယ်ရန်စျေးကွက်သမားတစ် ဦး မလိုအပ်ပါ။ စျေးကွက်သမားများကသူတို့၏ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်များကိုဈေးဆိုင်များအကြားဖြန့်ဝေရန်ရွေးချယ်သောကြောင့်“ AOR” ဟူသောအယူအဆသည်အဓိပ္ပာယ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ထို့အပြင်ရိုးရာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအကြားနံရံများပြိုလဲလာသည်နှင့်အမျှဒီဂျစ်တယ်ယူနစ်များကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ပိုမိုကြီးမားသောအေဂျင်စီမူဘောင်အတွင်းတွင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းမီဒီယာအကောင့်များကိုပိုမိုကြီးကြပ်ရန်ရိုးရာအေဂျင်စီများအားစိန်ခေါ်ခြင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
အကြားယှဉ်ပြိုင်မှု၏အကွာအဝေး ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်များ ကျယ်လာလိမ့်မယ် - ရိုးရာနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာ ၀ ယ်ခြင်းအကြားစစ်ပွဲများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကတွင်ထင်ဟပ်ပြသလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အမှန်တကယ်“ ဘက်စုံ” ချဉ်းကပ်မှုကိုတောင်းဆိုသည့်အခါစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ဦး ဆောင်မှုကိုကြော်ငြာအမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများသာမက PR ကုမ္ပဏီများနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်များနှင့်လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများက ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုလိမ့်မည်။
၏ပေါ်ပေါက်ရေး ဆက်သွယ်ထားသောအေဂျင်စီ - ဤတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွါးလာသည်နှင့်အမျှပိုကြီးသည့်холдингကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခါမျှမတူအောင်တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းမှသည်စီမံကိန်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းအထိ၊ PR စနစ်သို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းများသို့ဆွဲဆောင်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာတစ်ခုထက်ပိုသောအစိတ်အပိုင်းများထက်ပိုမိုကြီးမားသော Gestalt အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ အဲဒီပုံစံကိုနှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့အစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကဒီရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်ထိုးဖောက် ၀ င်ပေါက်မှုတွေကအမှန်ပဲ။
အဘိဓာန်ဟောင်းနှင့်အတူ၊ အသစ်နှင့်အတူ - အတိတ်တွင်“ GRPs”၊ “ impressions” နှင့်“ clicks” စသည့်အသုံးအနှုန်းများသည်အသုံးစရိတ်များကိုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အောင်မြင်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းတို့အတွက်ပရိသတ်ကိုတိုင်းတာသည့်စံနှုန်းဖြစ်သည်။ ဒီဝေါဟာရများ၏အရေးပါမှုကိုလျော့နည်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို“ တစ်သက်တာတန်ဖိုး”၊ “ စိတ်ဓာတ် / နှစ်သက်မှု” နှင့်“ သြဇာ” ဟူသောအယူအဆများဖြင့်အစားထိုးရန်သင့်တော်သည်။ “ ပရိသတ်” ကိုပင်အသုံးပြုခြင်းသည်သမိုင်း၏အမှိုက်ပုံအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်၊ အင်တာနက်ခေတ်တွင်တစ်ချိန်တည်းမီဒီယာတစ်ခုသို့“ ရှေ့သို့တက်လှမ်း” ခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများမြင့်တက်လာခြင်းတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေလိုသူစားသုံးသူများအားပိုမိုတိကျသောအသုံးအနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သူမှာပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။
ကနေကိုးကားစာရင်း အွန်လိုင်းမီဒီယာအစီရင်ခံစာ eConsultancy မှ။
ဤသည်အဘယ်မှာရှိ DK New Media'' ကြီးထွားလာခဲ့သည် ... အတွက် ဆက်သွယ်ထားသောအေဂျင်စီ အာကာသ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ပြိုင်ဘက်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ အလားအလာများ၊ ရောင်းချသူများ၊ ငါတို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါ၊ ဒီအစီရင်ခံစာမှာငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးမော်ဒယ်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုတွေ့ရတာအရမ်းပျော်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါကမည်မျှပင်ခက်ခဲပါစေဂီယာကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအထူးများရှိသည့်အခြားရောင်းချသူများနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ Coopetition ၌တည်ရှိ၏။ သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်သင့်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အချိန်တန်ပြီ စံချိန်တင်၏အေဂျင်စီ စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်ပညာရှင်များ၏မတူကွဲပြားမှုများကိုအသုံးချခြင်း မီဒီယာအသစ်.
သြဂုတ် 16, 2012 မှာ 11: 36 AM
ကောင်းသော post! ၎င်းကိုနှစ်သက်ပြီးသင်၏အဓိကအချက်များကိုသဘောတူသည်။
3:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 54
တကယ်တော့ဒီ post ဒေါက်ဂလပ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အခြားအေဂျင်စီတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောအရာများ မှလွဲ၍ ဘာမျှမမြင်ပါ။